» मकवानपुरले कति पायो कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप ?
मकवानपुरले कति पायो कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप ?
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १४:३६
मकवानपुर । मकवानपुरका दशवटा स्थानीय तहका लागि साढे ६ हजार चीनबाट प्राप्त भेरोसेल खोप उपलब्ध भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा ६ हजार ५ सय डोज खोप आएको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार ६२ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहकालाई पहिलो डोज लगाउन खोप आएको हो । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बुधबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरेले पूर्वी क्षेत्रस्थित बागमती गाउँपालिकाले मंगलबारबाटै खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालयले हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई २ हजार ७ सय डोज, थाहा नगरपालिकालाई ६ सय ८५, मनहरी गाउँपालिकालाई ५ सय ३९, बकैयालाई ४ सय ८६ डोज, बामगतीलाई ४ सय ३४ डोज उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी मकवानपुगढी गाउँपालिकाले ३ सय ९३, भीमफेदीले ३ सय ९३, कैलाशले ३ सय ७८, राक्सिराङले २ सय र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले १ सय ९२ डोज खोप लगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि मकवानपुरमा भारतबाट प्राप्त कोभिशिल्ड खोप पहिलो चरणमा २१ हजार ४ सय ३ जनाले र दोस्रो चरणमा ६ हजार २ सय ४१ जनाले खोप लगाएका छन् । मकवानपुरमा कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाउन बाँकीको संख्या १५ हजार १ सय ६२ छ ।
जिल्लामा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ९ हजार ४ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जसमध्ये ७ हजार ४ सय ७० जनाले कोरोनालाई जितेका छन् भने १ सय ६ जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ ।